Khabiirka Kala Duwan: Ka-reebista Cinwaanka IP-ka Google Analytics
Maamulayaasha shabakada ee xilligan SEO-ga ayaa ka mahad celinaya sameynta Google Analytics oo ah qalab loogu talagalay falanqaynta gaadiidka bogga . Waxay bixisaa macluumaad qiimo leh oo ku lug leh ganacsiyada ku saabsan isdhexgalka macaamiisha internetka. Taas macnaheedu ma ahan, midna ma xaqiijin karo saxnaanta xogta qiimaha leh tan iyo markii isticmaaleyaasha qaar uun ay booqdaan bogagga si ay u helaan macluumaad gaar ah iyagoo aan wax iibsan.
Si kastaba ha ahaatee, Igor Gamanenko, Maamulaha Guud ee Macaamilka Mareeyaha Macaamilka, ayaa sheegaya in haddii aad rabto inaad xaqiijiso saxsanaanta warbixinnadaada, waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysato ilaha xogta si loo soo gudbiyo warbixinnada kaliya ee bogga dhabta ah dadka soo booqda. Dhab ahaantii, Google Analytics ayaa sidoo kale diiwaangeliya isku-dayga isku-dayga maamulka haddii xitaa aysan marnaba qaadin tallaabooyin kale marka laga reebo dayactirka. Sidaa darteed, maamuluhu waa inuu ka fogaadaa Google Analytics isaga oo xakameynaya cinwaanka IP-ga domainka ka soo baxa warbixinta Google Analytics - palestre da case in vendita. Ka hor inta aynaan arkin sida aan u sameyn karno, waa inaan fahamnaa sida cinwaanada IP Protocol (IP). Qalab kasta oo elektaroonik ah oo loo adeegsado in uu internetka helo wuxuu leeyahay cinwaanka IP-ga gaar ah. Waxaad ubaahan doontaa inaad ka hesho cinwaanada IP ah dhammaan qalabka loo isticmaalo in lagu galo websaydh iyo Google Analytics
Habka ugu fudud uguna badan ee lagu heli karo cinwaankaaga IP ayaa raadinaya "waa maxay cinwaanka IP" mashiinka raadinta sida Google. Lambarrada IP lambarka waxay soo baxaan qaybta natiijooyinka soo socda ee ku yaal bogga sare. Waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka sameyso lambarada cinwaanada IP-ga ee tixraaca mustaqbalka Ku sii soco koontada Google Analytics, guji 'tabaha' 'tabaha ugu sareeya ee bogga. Waxaa jira 'Filters' qaybta saddexaad ee dhinaca midig ee bogga internetka. Xulo 'Filter' oo dhamaystir tallaabada ugu dambeysa ee abuurista santuuqa adigoo isticmaalaya '+ Fadlan cusub'. Waxaa lagaa doonayaa inaad magacawdo shaandhaynta cusub
Marxaladdan, waxaad ubaahan tahay inaad u habeyso filterka. Waxaa jira 2 nooc oo kala duwan oo farsamaysan; 'Predefined' iyo 'Custom'. Kaddibna dooro inta u dhaxaysa "Ka saar" iyo 'Ku dar' cinwaanka IP 'Xaaladayada, waxaa lagaa doonayaa inaad qeexdo ilaha ama goobta gaadiidka laga saaro ama lagu daro.Waxaan ku tiirsaneynaa kalmadaha si aan u habeyno codka halkan' Select Expression ' ikhtiyaarka iyo liiska hoos u dhigista "waxaad u dhigantaa." Tusmada natiijadu waxay ku weydiin doontaa inaad tilmaamto cinwaanka IP-ka ee qalabka la raadiyay horaantii. Haddii aad isticmaasho dhowr qalab sidaas darteedna aad leedahay cinwaano badan oo IP ah si aad uga baxdid, waa inaad ku celisaa dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan ee isla nidaamkaas.
Marka cinwaanada IP laga reebo Google Analytics, waxaad xor u tahay inaad ka raadiso websaydhka adiga oo aan welwel ku jirin spam gudbinta ee ka muuqda warbixinnada. Xogta ay hayso ayaa hadda ah mid sax ah oo matalaysa dhaqdhaqaaqa macaamiisha.